Vaovao Tapatapany : Herinandron’ny fanorona -
AccueilSongandinaVaovao Tapatapany : Herinandron’ny fanorona
Vaovao Tapatapany : Herinandron’ny fanorona
Lalaon-tsaina mampiavaka ny Malagasy ny fanorona. Hotanterahina manomboka ny 16 jona izao ny herinandron’ny fanorona, izay natao hampahafantarana sy hampiroboroboana io lalaon-tsaina io. Ny 16 ka hatramin’ny 22 jona dia hisy ny fampirantiana momba ny fanorona etsy amin’ny 3,14 etsy Ambatonakanga. Ny sabotsy 16 jona sy ny alarobia 20 jona kosa amin’ny 2 ora sy sasany, dia hisy ny atrikasa momba ny fanorona etsy amin’ny ivon-toeran’ny kolontsaina Malagasy (IKM) Antsahavola. Ny 16 jona ihany dia hisy ny famelabelarana momba ny fanorona manomboka amin’ny 9 ora maraina ao amin’ny IKM Antsahavola ihany.
Taorian’ny teny amin’ny Coliseum Antsonjombe, tamin’ny fetin’ny reny, dia averina indray fa etsy Antsahamanitra indray ilay hetsika ho an’ny fetin’ny reny « Fetin’ny maman’ty » andiany faha-5. Toa ny mahazatra dia ireo mpanao hatsikana sangany eto Madagasikara no handray anjara amin’ny hetsika amin’ireo hira sy hatsikana. Ao anatin’izany ry Françis, Gothlieb, Honorat ao amin’ny tarika fou Hehy, zisy sy Lenina, groupe Tsidika avy any Fianarantsoa, Barhone… Hitovy amin’ny ankapobeny ny seho nefa hisy ihany ny mety hiova kely.
Anisan’ireo antoko mpihira manana ny lazany amin’izao fotoana i Tanora Masina Itaosy. Hiaka-dapa, ary hanolotra seho etsy amin’ny Lapan’ny Fanatanjahantena izy ireo ny alahady 8 jolay ho avy izao. Mandritra izany no hiangalian’izy ireo ny hira nahafantarana azy toa ny « Mamela ny Nosinay », « Ahy Jesosy », « Matokia »…